IRAN Oo Farriin Cabsi Leh U Dirtay Imaaraadka Carabta – somalilandtoday.com
(SLT-Abu Dubai)-IRAN ayaa si toos ah ula xidhiidhay dhaxal-sugaha Abu Dhabi Mohammed bin Zayed toddobaadkii tegay, uguna hanjabtay weerar culus oo jawaab u ah weerar kasta oo Mareykanka ay ku qaadaan Tehran, waxaa sidaas weriyey Middle East Eye.
Inkasta oo sirdoonka Israa’iil ay si qarsoodi ah ugu sheegteen dilkan xidhiidh ay la sameeyeen wargeyska New York Times, haddana Iran ayaa sidoo kale rumeysan in laga yaabo in madaxweynaha xilka ka degaya ee Mareykanka Donald Trump uu ku qaadi karo weerar ku ciil bax ah ka hor 20-ka January.
“Mohammed bin Zayed waxa uu hanjabaad toos ah ka helay Iran. Cidna looma soo marin,” ayuu yidhi il-wareed sare oo Imaaraadi ah oo la hadlay Middle East Eye.
Imaaraadka Carabta, oo 70km oo dhanka badda Gacanka ah u jirta Iran, ayaa xulufo la ah madaxweyna Trump, waxayna dhowaan xidhiidh rasmi ah la yeelatay Israa’iil.
Sida uu sheegay il-wareedyo, xidhiidhka ay Iran sida tooska ah ula sameysay Mohammed bin Zayed ayaa yimid saacado ka hor inta aysan Imaaraadka Carabta soo saarin Axaddii qoraal ay wasaaradda arrimaha dibedda dalkaas ku cambaareysay dilka Mohsen Fakhrizadeh.
Tehran ayaa rajeyneysa in maamulka cusub ee Mareykanka ee Joe Biden uu wax ka beddeli doono xiisadda Bariga Dhexe, ayada oo la rumeysan yahay in Biden uu doonayo in wada-hadal iyo xal wax lagu dhameeyo, si ka duwan Trump oo ay adeegsadaan Sacuudiga iyo Israa’iil.